के हो पश्चिम नेपालको आकाशमा देखिएको त्यो चम्किलो दृश्य ? « Artha Path
काठमाडौं । बिहीबार साँझ पत्रकार प्रकाश डुम्रेले फेसबुकले लेखे–केही मिनेट अगाडि पश्चिम नेपालको आकाशमा एउटा चम्किलो वस्तु अस्वाभाविक तीव्रतामा उज्यालो छर्दै पृथ्वीतर्फ झरेको देखियो, यो के होला र ?
सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले वास्तविकता को हो भन्ने आफूहरु खोजमै रहेपनि प्राप्त सूचनाका आधारमा त्यो चम्किलो बस्तु उल्कापिण्ड हुन सक्ने जानकारी दिए ।
यद्यपि उनले आवाज आएको भन्ने सन्दर्भमा बुझ्न सम्बिन्धित जिल्लाका प्रहरी कार्यालयबाट टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।
‘आकाशमा चम्किलो बस्तु देखिएको हो । ठूलो आवाज पनि आएको भन्ने सूचनामा आधारमा हामीले सम्भावित ठाउँहरुमा प्रहरी खटाएका छौं’, उनले भने । रातोपाटी